မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): အိမ်ထောင်ရေးသုခ အပြည့်အ၀ ခံစားနိုင်ရန် အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပါ
အိမ်ထောင်ရေးသုခ အပြည့်အ၀ ခံစားနိုင်ရန် အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပါ
ချစ်သူရယ် လို့ ဖြစ်လာရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အလျှော့ပေး ရတာတွေ၊ နားလည်ပေး ရတာတွေ၊ ကိုယ့်ဘက် က ပြုပြင်ပေးရတာတွေ ရှိလာပါတယ်။ ဒီလို လုပ်နိုင်မှလည်း အဲဒီချစ်ခြင်းက ခိုင်မြဲပါတယ်။
အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ပြီ ဆိုရင်တာ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်သူလိုရော၊ လူသားလိုပါ ဆက်ဆံ တတ်ဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ ချစ်သူဘ၀တုန်းက တာဝန် ဆိုတာကို ခွဲဝေယူရတာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ တာဝန်အ စား တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဂရုစိုက်တယ်၊ အချိန်ပေးတယ်လို့ ပဲ မှတ်ယူ ခဲ့ကြပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ ဘ၀နှစ်ခုကနေ တစ်ခု ဖြစ်သွားပြီမို့ရှေ့ ဆက်လျှောက်လှမ်းရာ မှာ လည်း မောင်တစ်ထမ်း၊ မယ်တစ်ရွက် သွားရမယ်ဆိုတာ စာသိ သိကြ ပါတယ်။ လက်တွေ့ မှာကျတော့ ကွဲလွဲမှုလေးတွေ ရှိလာနိုင် ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အမျိုးသမီးထုရဲ့ ခံယူချက် ၂မျိုးကွဲပြားပုံကို တင်ပြပါမယ်။ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဟာ ၂မျိုး ပဲရှိပါတယ်။ ပထမတစ်မျိုးက Family Oriented လို့ ခေါ်တဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပြီးရင် မိမိလင်ယောက်ျား နဲ့သားသမီးများရဲ့ဘ၀ရှေ့ ရေးအတွက် မိမိကိုယ်ကိုယ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုက်မယ် ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးများဖြစ်ပြီး ဒုတိယ တစ်မျိုးကတော့ Job Oriented လို့ ခေါ်တဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပြီးရင်လည်း ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်မယ်၊ ကိုယ့်ဝင်ငွေ ကိုယ်ရှာမယ်၊ အိပ်ခန်း မီးဖို ရေချိုးခန်း တွေထဲမှာတော့ ဘ၀ကိုအဆုံးမခံဘူးလို့ ဆိုတဲ့ အမျိုး သမီးတွေပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
သင်ဟာ Family Oriented ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Job Oriented ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထောင်ရေး သုခကိုတော့ ခံစားချင် မှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မိသားစုအရေးရှေ့ တန်းတင်သူတွေကလည်း တစ်နေ့ တစ်နေ့ဇယ်ဆက်သလို လုပ် တာတောင် မပြီးနိုင် တဲ့ အိမ်အလုပ်၊ မိသားစု အလုပ်တွေကြောင့် နွမ်းလျပင်ပန်းကြသလို ကိုယ့်အလုပ် ကို ရှေ့ တန်းတင်သူတွေကလည်း အလုပ်ရဲ့ ဖိစီးမှု အိမ်အထိပါလာပြီး အလုပ်နဲ့ မိသားစုအကြား သဟဇာ တဖြစ်အောင် နေဖို့ ခက်ခဲလာတာကို တွေ့ကြ ရပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ခါမှ အိမ်ထောင်ရေးသုခ မခံစားရတော့တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဒုနဲ့ဒေး ပါပဲ။ သင်ဟာ Family Oriented ပဲဖြစ်ဖြစ် Job Oriented ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်များမှာကတော့ သေချာပါ တယ်။ တစ်နေကုန် တစ်နေခန်း မောပန်းနွမ်းနယ်လာပြီး တဲ့နောက် ခေါင်းအုံးပေါ်ခေါင်းချ လိုက်တယ် ဆိုရင် ကိုပဲ ခေါခနဲ အိပ်ပျော်သွားကြ မယ့် သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်က ခင်ပွန်းသည်ကို စိတ်ကျေနပ်မှု မပေး နိုင်တော့သလို မိမိကိုယ်၌ကလည်း အိမ် ထောင်ရေးသုခ မခံစားရဘဲ အိမ်ထောင်ရေး ဖိအားကိုပဲ ခံစားရ တာလိုမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့ အမျိုးသမီးများအနေနဲ့အိမ်ထောင်ရေးသုခကို အပြည့်အ၀ခံစားနိုင်ဖို့ ရာ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်စက်ရပါမယ်။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ မိမိခင်ပွန်းသည်ကို ပြုစုယုယရာ မှာလည်း စိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်စွမ်းသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်ရှိလွယ်ကြပါတယ်။ အိပ်ချိန် တစ်နာရီ ပိုတိုင်း အိမ်ထောင်ရေးသုခ ပြည့်ဝစွာခံစားရနိုင်ခြေ ၁၄ ရာခိုင်နှူန်း တိုးလာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားလပ်ရက် ပိတ်ရက်တွေမှာ အိပ်ရေးဝအောင် အားပါးတရအိပ်စက်ပြီး လင်မယား ချစ်တင်း နှီးနှော တာဟာ အလွန်လျော်ကန် သင့်မြတ်တဲ့ ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ညအချိန် အိပ်စက်မှုဖြစ်ရပါမယ်။ ညကို ဘယ်နှစ်နာရီ အိပ်သလဲ၊ ဘယ်လောက်အထိ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သလဲ၊ အိပ်ပျော်ခါနီးမှာ ခံစားမှုတွေက ဘယ်လိုရှိသလဲ ဆိုတာတွေဟာ အမျိုး သမီးတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး သုခ ပြည့်ဝစွာ ခံစားရနိုင်ခြေကို အများကြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။
သင်ဟာ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဒီမေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေကြည့်ပါ။ အိပ်ယာဝင်ပြီး လွယ် လွယ် နဲ့ အိပ်ပျော်သလား၊ ဒါမှမဟုတ် အိပ်မပျော်ဘူးလား။ တစ်ည၊ တစ်ညကို ဘယ်နှစ်နာရီ အိပ်ရသလဲ။ မိမိ ကိုယ်ကို အိပ်ရေးဝအောင် မအိပ်စက်ရသူအဖြစ် စိုးရိမ်သနားနေမိ တတ်ပါသလား။ သင့်အနေနဲ့အိမ်ထောင်ရေး သုခကို ဘယ်လောက်အထိ ကျေနပ်မှုရပါသလဲ။
တစ်ညကို ၇နာရီကျော် အိပ်စက်ခွင့်ရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ စိတ်ကြည်လင် လန်းဆန်းပြီး အမျိုးသမီး ဆန္ဒတွေလည်း တက်ကြွလှုပ်ရှားနေလေ့ ရှိတာမို့မိမိခင်ပွန်း ကိုကောင်းစွာပြုစုနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်နေကုန် မွန်းကြပ်နေ အောင် အလုပ်လုပ်ပြီး အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့လည်း အိမ်မှုကိစ္စ ဗာဟီရ က ရှိနေမယ်၊ ဒါ့အပြင် ကလေးညအိပ် ပျော်နေပြီး ရှူးပေါက်တာတွေကို ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ကချဉ်း ဖြေရှင်းနေ ရမယ်ဆိုရင် ဘေးကနေ တခေါခေါနဲ့အိပ်မောကျနေတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ကို အလိုလို မုန်းလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ အိမ်ထောင်ပြုပြီဆိုရင်ကိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀ဟာ ပြောင်းလဲတော့မယ် ဆိုတာကို လက်ခံဖို့ လိုပါတယ်။ အမျိုး သမီးများအနေနဲ့ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ မိဘ၊ဆွေမျိုးများကို ကိုယ့်မိဘဆွေမျိုးတွေထက် အချိန်ပိုပေးရတယ် ဆိုတာကို သဘောပေါက် သိမြင်လာကြ ပါလိမ့်မယ်။ ဒီကြားတဲ အိမ်မှုကိစ္စတွေ အလုပ်ကိစ္စတွေ ရှိနေဦး မယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင် ရေးသုခကို အပြည့်အ၀ခံစားရဖို့လိုက်လေဝေးလေပဲမို့ဘယ်လောက်ဘဲ အလုပ် များများ ညညကိုတော့ အိပ်ရေး ၀အောင် အိပ်စက်သင့်တယ်လို့လေ့လာရေးသား တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
1. Sex Relieves Stress စိတ်ဖိအားကျစေတယ် လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရင် Stress စိတ်ဖိအား နည်းပါးစေတယ်။ Blood pressure သွေးတိုးကိုလည်း ကျစေတယ်။ စကော့တလန် သုတေသန လုပ်သူတွေက ယောက်ျား ၂၂ ယောက်နဲ့ မိန်းမ ၂၄ ယောက်ကို လေ့လာခဲ့တဲ့ ရလဒ်တွေအရ ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးဖိအားမှာ ပိုအရေးပါတဲ့ Diastolic blood pressure အောက်ဂဏန်း ကျတာဖြစ်တယ်။ ပွေ့ဖက်မှုကနေတောင်မှ အမျိုးသမီးတွေမှာ သွေးတိုးကျတယ်လို့ဆိုတဲ့ လေ့လာမှုလဲ ရှိပါသေးတယ်။ 2. Sex Boosts Immunity ခုခံအားတက်စေတယ် Good sexual health ကောင်းမွန်တဲ့ လိင်ကျန်းမာရေးကနေ ကိုယ်ကာယ ကျန်းမာရေးကိုပါ တိုးတက်စေတယ်။ တပါတ် ၁-၂ ကြိမ် ဆက်ဆံမှုကနေ Antibody (အင်တီဘော်ဒီ) ခေါ်တဲ့ ခုခံအားမှာ အသုံးကျတာတွေ များလာတာကို တွေ့ရတယ်။ Immunoglobulin A (IgA) လို့ ခေါ်ပြီး ရောဂါပိုးဝင်ရင် ထွက်လာတယ်။ Wilkes University (ဝေါ်လကီစ်) တက္ကသိုလ်က ပညာရှင်တွေကနေ ကျောင်းသူ-ကျောင်းသား ၁၁၂ ယောက်ကို သူတို့ တံတွေး-နမူနာတွေ ယူပြီး စစ်ဆေးတယ်။ လိင်မှုပြုတာ တပါတ်မှာ ၁-၂ ကြိမ်ပြုသူတွေမှာ လုံးဝမလုပ်သူ၊ နည်းနည်းသာပြုသူတွေနဲ့ သိပ်များများ ပြုသူတွေထက် IgA ပိုရှိနေတာ တွေ့ရတယ်။3. Sex Burns Calories (ကယ်လိုရီ) ကျစေတယ် မိနစ် ၃ဝ ကြာ လိင်ဆက်ဆံမှုကနေ ၈၅ (ကယ်လိုရီ) ကုန်စေတယ်။ များတယ် မထင်ရပေမဲ့ အကြိမ်ပေါင်း ၄ဝ ကျော်ရင် ကယ်လိုရီပေါင်း ၃ဝဝဝ ကျော်တယ်။ တနည်းပြောရရင် ကိုယ်အလေးချိန် (၁) ပေါင်ကျစေတယ်။ American Association of Sexuality Educators and Therapists အမေရိကန် လိင်ကျန်းမာရေးပညာရှင် Patti Britton (ပက်တီ-ဘရင်တန်) က ပြောပါတယ် Sex isagreat mode of exercise "(ဆက်စ်) ဟာ လေ့ကျင့်ခန်းကောင်း တခုဖြစ်တယ်။ ရုပ်ပိုင်းရော စိတ်ပိုင်းကိုပါ တိုးတက်စေတယ်။"4. Sex Improves Heart Health နှလုံးကျန်းမာရေး အားပေးတယ် အစဉ်အလာ ထင်တာတခုက နှလုံးရောဂါသည်ဟာ လိင်ဆက်မှုပြုတဲ့ခါ Stroke (စထုပ်ခ်) ရစေနိုင်မလား စိုးရိမ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Journal of Epidemiology and Community Health က သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အဆိုအရ ယောက်ျားပေါင်း ၉၁၄ ယောက်ကို အနှစ် ၂ဝ ကြာလေ့လာမှုအရ အဲလိုမဖြစ်စေတာကို သိရတယ်။ တပါတ်မှာ ၁ ကြိမ် နဲ့ ၂ ကြိမ် ဆက်ဆံမှုပြုသူ ယောက်ျားတွေထဲက တဝက်မှာ Fatal heart attack သေစေနိုင်တဲ့ နှလုံး (အတက်ခ်) ရတာ နည်းကြတာကိုပါ သိလာရတယ်။5. Sex Boosts Self-Esteem ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးစိတ် ပိုစေတယ် University of Texas (တက္ကဆပ်စ်) တက္ကသိုလ်က ပြုစုထားတဲ့ လူတွေဘာလို့ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုကြသလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရား ၂၃၇ ပါးထဲမှာ ကိုယ်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးစိတ်ဆိုတာလဲ ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို (ကိန်းဘရစ်ခ်ျ) က ပညာရှင် Gina Ogden (ဂျီနာ-အော်ဒင်) ကလဲ ထောက်ခံချက်ပေးပါတယ်။ သူမပြောတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးမှု ရှိသူတွေမှာ လိင်ဆက်ဆံတာဟာ ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အသိစိတ် ရချင်ကြလို့ဖြစ်တယ်။6. Sex Improves Intimacy တယောက်နဲ့ တယောက် ပိုပြီးရင်းနှီးစေတယ် Having sex လိင်ဆက်ဆံကြမယ်၊ Orgasms (အောဂဇင်) လဲ ရမယ်ဆိုရင် Oxytocin (အောက်စီတိုဇင်) ဟော်မုန်း ပိုထွက်လာမယ်။ နှစ်ယောက်သား ပိုပြီးခိုင်မြဲတဲ့ စည်းနှောင်မှုကို ရစေမယ်၊ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရာလဲ ကျတယ်။ University of Pittsburgh and the University of North Carolina တက္ကသိုလ် ၂ ခုက ပညာရှင်တွေ သွေးမဆုံးသေးတဲ့ အမျိုးသမီး ၅၉ ဦးကိုလေ့လာရာက အဖြေထုတ် လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ကိုယ်အဖေါ်အတွက် ရက်ရောမှုပါ ပိုလာကြသေးတယ်။7. Sex Reduces Pain နာတာကိုသက်သာစေတယ် Oxytocin (အောက်စီတိုဇင်) ဟော်မုန်း များလာနဲ့အတူ Endorphins (အင်ဒိုဖင်) လဲ တက်လာတယ်။ ဒါကနေ နာတာကို သက်သာစေမယ်။ “ခေါင်းကိုက်တာ၊ အဆစ်နာတာ၊ ရာသီမလာခင်နာတာ ဘာလို့နာနာ လိင်ဆက်ဆံပါ” လို့ အကြံပြုတယ်။ Bulletin of Experimental Biology and Medicine မှာ ရေးထားတာတခု ရှိတယ်။ လူ ၄၈ ယောက်ကို Oxytocin vapor အငွေ့ရှူခိုင်းပြီး လက်ထိပ်တွေကို ဆိတ်နည်းနဲ့ အနာခံနိုင်မှုကိုတိုင်းပြီး စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။8. Sex Reduces Prostate Cancer Risk ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ အဖြစ်နည်းစေတယ် ငယ်ရွယ်သူတွေ Ejaculations သုက်လွှတ်တာ အကြိမ်များသူတွေမှာ သူတို့ကြီးလာရင် ဆီးကျိတ်-ကင်ဆာ ဖြစ်မှာကို နည်းစေနိုင်တယ်လို့ British Journal of Urology International မှာ သြစတြေးလျှ ပညာရှင်တွေကနေ ရေးထားပါတယ်။ ရောဂါရှိပြီးသားလူတွေမှာတော့ ထူးခြားစေမှု မရှိတာတွေ့ရတယ်။ Journal of the American Medical Association မှာလဲ တလမှာ ၂၁ ကြိမ်နဲ့အထက် သုက်လွှတ်ကြ သူတွေဟာ အသက်ကြီးလာရင် ဆီးကျိတ်-ကင်ဆာ ဖြစ်တာ နည်းကြတယ်လို့ ရေးထားတယ်။9. Sex Strengthens Pelvic Floor Muscles တင်ပါးဆုံတွင်းက ကြွက်သားတွေ အားကောင်းစေတယ် အမျိုးသမီးတွေမှာ Kegel exercise (ကီဂယ်လ်) လေ့ကျင့်ခန်းလို့ခေါ်တဲ့ Pelvic floor muscle exercises လုပ်ရင် တင်ပါးဆုံတွင်းက ကြွက်သားတွေ၊ အရွတ်တွေ အားကောင်းစေတယ်။ သားအိမ်ကျတာ၊ ဆီးအိမ်ကျတာ၊ အစာဟောင်းအိမ် ကျတာကို မဖြစ်အောင် တားနိုင်တယ်။ ရှိနေရင်လဲ သက်သာစေမယ်။ တကယ်လို့ လိင်ဆက်ဆံနေချိန် အခိုက်အတန့်မှာ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမျိုး လုပ်ရင် စောစောကလို အားကောင်းစေ တာတွေအပြင် သာယာမှုကိုပါ ပိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်။10. Sex Helps You Sleep Better ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေမယ် Orgasm (အော်ဂဇင်) ရလို့ ထွက်လာတဲ့ Oxytocin (အောက်စီတိုဇင်) ကြောင့် ပိုပြီးအိပ်ပျော်စေတယ်။ အိပ်စက်ခြင်းဟာ သွေးတိုးကျစေတယ်။ ကျန်းမာရေး ကောင်းစေတယ်။ဒီဆေးစာမှာ အကျိုးဘက်ကနေကြည့်တာချည်းသာ ပါတယ်။ အားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျားလို့ မယူဆစေချင်ပါ။ သတိထားစရာတွေ ဆက်တွဲဖြစ်တတ်တာတွေ၊ ရှောင်သင့်တာတွေ မပါတာ သတိပြုပါ။
Author MSSK at 4:34:00 PM